Eden Hazard oo kala cadeeyay haddii uu ku laabanayo Chelsea ama uu sii joogi doono Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 31 Maajo 2021. Ciyaaryahanka reer Belgium iyo kooxda Real Madrid ee Eden Hazard, ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan inuu ka tagayo Los Blancos iyo inuu ku laabanayo kooxdiisii ​​hore ee Chelsea, xilli ciyaareedka soo socda.
Eden Hazard ayaa lala xiriirinayay suurtagalnimada uu dib ugu laabanayo horyaalka Premier League, si uu ugu ciyaaro kooxda Chelsea kaddib markii uu ku guuldareystay inuu isku muujiyo Real Madrid labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Sida uu shaaca ka qaaday wargeyska “AS” ee dalka Spain Eden Hazard ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Weli waxaan heystaa seddex sano oo qandaraaskeyga kooxda Real Madrid ah, sidaas darteed kuma laabanayo England shaki la’aan.”
“Qof walba wuu ogyahay in labadii sano ee iigu horeysay Real Madrid aysan fiicneyn, waxaan marka hore doonayaa inaan isku muujiyo Real Madrid, wax walbana waan u sameyn doonaa si aan ugu guuleysto arrintaas.”
“Xaqiiqdii ma arko aniga oo ka tagaya Real Madrid. Waan ixtiraamayaa qandaraaska aan kula jiro kooxda, waan aqaanaa nafteyda waana ogahay xaallada aan ku jiro, wax walba ayaan siin karaa Real xilli ciyaareedka soo socda waana qorshahayga.”
Kooxaha Elman iyo Dekedda oo barbaro ku kala baxay kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League... + SAWIRRO